Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus Caymisku waa hab looga badbaado khasaaro dhaqaale. Waa nooc ka mid ah maareynta khatarta, oo badiyaa loo isticmaalo in laga gooyo khatarta ka iman karta khasaaro ama aan la hubin. Cidii bixisa caymiska waxaa loo yaqaana caymis, shirkad caymis, caymis caymis ama hooste. Qof ama shirkad iibsato caymiska waxaa loo yaqaan caymis ama siyaabo kale. Caymiska ceymiska wuxuu ku lug leeyahay caymis la isku haysto oo la isku halleyn karo lana yiraahdo lumis yar ee foomka lacag bixinta caymiska si loogu beddelo ceymiska caymiska si loo magdhabo ceymiska haddii ay dhacdo khasaare caymis. Dhimashadu waxay noqon kartaa ama ma noqon kartaa mid dhaqaale, laakiin waa inay noqotaa mid lagu yareyn karo shuruudaha maaliyadeed, waxaana badanaa ku lug leh wax caymis ah oo leh dulsaar caymis oo uu abuuray lahaansho, lahaansho, ama xidhiidh hore. Caymisku wuxuu helayaa qandaraas, oo lagu magacaabo caymiska, kaas oo faahfaahinaya xaaladaha iyo duruufaha uu caymisku magdhabayo caymiska.
Qadarka lacagta caymiska ee caymiska caymisyada caymisyada lagu cayimay caymiska waxaa loo yaqaan 'premium'. Haddii caymisku khibrad u leeyahay khasaare caymis oo caymis daboolaya, caymisku wuxuu u gudbiyaa caymiska si uu u shaqeeyo qaddar-sheege. Caymisku wuxuu halis u noqon karaa khatartiisa isaga oo qaadanaya dib u celinta, iyada oo shirkad kale oo caymis ahi ay ogolaato in ay qaaddo qaar ka mid ah khatarta, gaar ahaan haddii caymiska asaasiga ah uu u arko in halis weyn ay u tahay inuu qaado. Hababka loo wareejinayo ama loo qaybin lahaa khatarta waxaa ka shaqeeya Ganacsatada Shiinaha iyo Babilitera oo horey u ahaa sida 3-aad iyo 2-aad ee Millennia BC, siday isugu xigaan.1 Ganacsatada Shiinaha oo u socdaalaya wabiyada khatarta ah ayaa dib u cusbooneysiin doona weelkooda ku jira maraakiib badan si ay u xaddidaan lumitaanka sababta oo ah markab . Baabiliyayaashu waxay sameysteen nidaam kaas oo lagu diiwaangeliyay Xeerarkii caanka ahaa ee Hammurabi, c. 1750 BC, oo ay ku dhaqmeen horaantii baayacmushtarka badda Mediterranean. Perihal Perkembangan Asuransi